Kyoto University - Study in Japan. Tacliinta Sare Abroad.
aasaasay : 1897
Ardayda (qiyaastii.) : 23000
Ha iloobin in aad discuss Kyoto University
Tan iyo markii ay aasaaska ee 1897, University Kyoto ku hawlanayd in ay baaqbaaq xorriyadda tacliinta hoos ruux is-tiirsanaanta iyo is-ixtiraam, iyo in la furo ilaa jahooyinka cusub ee dadaalka scholarly hal abuur leh. Jaamacada ayaa sidoo kale doonayeen inay gacan ka noolaanshaha nabad guud ahaan beesha caalamka.
Our adduunka ayaa hadda haysato tiro ka mid ah isbedel deg deg ah in ay noqon lahaayeen kuwa aan la qiyaasi karo in qarnigii 20-. The qaab dhismeedka khilaafka caalamiga ah, kaas oo la filayay in lagu xalin la dhamaadka Dagaalkii Qaboobaa, waxaa dhab ahaan sii kordhaya iyadoo ay sabab u khillaafka qabaailka iyo diinta ee kakanaanta iyo xoojinta labada. Isla mar ahaantaana, Xawliga ah ee deegaanka baaba'ay caalamka dedejisaa, masiibooyinka ugu waaweyn ee loo arag iyo cudurada faafa dilaaga farun dunida oo dhan, iyo dhibaatooyin dhaqaale oo la wada gariiri labada dhaqaalaha qaranka iyo nolosha shaqsiga in xudunta aad u. Jaamacadaha u baahan tahay inaad si dhab ah uga fikirto waxa ay u taagan yihiin in marar qasan. Dhanka kale, Dowladda Japan waxaa la jaamacadaha iyo shirkadaha ka shaqeeya si kor loogu qaado beerista ee caasimada aadanaha caalamiga ah, oo ugu baaqay in ay jaamacadaha hirgalinta habaynta loogu talagalay in kor loogu qaado ay tartan caalami ah. University Kyoto haatan u baahan yahay in la ogaado sida ugu wanaagsan ee ay uga jawaabto dalabka dowladda iyo bulshada weynta halka run ah in ruux aasaasay ay.
Saddexda ergooyinka asaasiga ah ee jaamacadeed waa waxbarashada, cilmi, iyo qayb bulshada. Laba ka mid ah, cilmi-baarista iyo qaaraan bulshada, waa xoog badnaayeen, in la beddelo oo ka jawaabaya suuqyada caalamka. Waxbarasho, si kastaba ha ahaatee, ayaa dabeecadda muhiim ah in Waxaan aaminsanahay inay noqon jirayaa. In line ay uga go'an tahay in waxbarasho madax-bannaan, University Kyoto waa in ay booska sida goobtii ah xoriyadda aqoonta, wax yar ka go'ay bulshada guud iyo unconstrained by heshiiska. Si ay sidaa u sameeyaan, jaamacada waa in ay noqdaan meel ay dadaali tacliinta sii wadi karo igmaday, halka sidoo kale bixinta daaqadaha dunida iyo bulshada galay. daaqadaha waxaa la furi karo xubnaha awood qalabaysan aqoon goynta-ku laayeen dunida iyo bulshada in ka baxsan been, laakiin doorka ugu muhiimsan ee aannu jaamacadda ayaa ciyaaray by ardayda maalgashadaan baxsan daaqadaha. Waa in aan si taxadar leh ula partners in industry iyo dowladda u shaqeeyaan si ay u siiyaan daaqadaha u ogolaanaysa ardayda inay sameeyaan isticmaalka ugu wanaagsan ee la taaban karo ee kartida ay leeyihiin jaamacadda.
isbedel badan ayaa hadda jira ee socota ee arrimaha dhaqaale ee jaamacadaha, ay ka mid yihiin hoos u dhac ku kab guud hawlgalka iyo kordhaya xooga ku saabsan maalgelinta tartan. Waxa uu noqday lagama maarmaan ah in aannu ka aamin lacag noo gaar ah in la sameeyo horumar in jawiga waxbarasho. Waxaan aaminsanahay in waa in aan kiiska ka dhigi bulshada weynta ku saabsan baahida loo qabo in horumar kuwan, in rajada ka ganacsiga ka qaata taageerada deeqsi ah in filan si aad ah University Kyoto, iyo Qalinjabiyeyaasha noo gaar ah. sidoo kale hore baan u eegto in ay dhisayaan iskaashi xoog leh bulshada deegaanka, kororsadaan faa'iidooyinka naga goobta ee Kyoto ee caasimada dunida-caan ah Japanese dhaqan-iyo jaamacadaha kale ee ka shaqeeya si ay u horumariyaan magaalada laftiisa galay campus oo hodan ah oo kala duwan tacliimeed. Intaas waxaa sii dheer, haddii aynu nahay in ay ku guulaystaan ​​soo jiidashada awood u fiican iyo ardayda jaamacadaha adduunka oo dhan, waxaan u baahan nahay si ay u horumariyaan manhajka asalka ah iyo mashaariic cilmi-wadajir ah in ay ka soo jiidashada Kyoto ee, oo waxaan ka dhigi caalamka loo yaqaan. Waxaan ku kalsoonahay in dadaalkaasi weyn wax uga tari doonaan horumarinta Gobolka, iyo in ay mustaqbalka ee Japan iyo dunida oo dhan.
Sida dhamaystiran ah, hay'ad cilmi-oriented, University Kyoto waa dhexgalaan fanka ay deeqsi iyo waxbarashada aasaaska, waxbarashada undergraduate khaas ah, iyo qalin barnaamijyada waxbarashada siyaabo in qalabayn ardayda abuurka iyo awood wax ku ool ah. In sidaa la yeelo waxay u baahan tahay horumarinta wadooyinka waxbarasho ee bixiya heshiis jaranjaro aqoon anshax kala duwan iyo fududaynta kala duwan oo kala dooran waxbarasho. Waxay qaadataa waqti loogu tala galay ardayda in ay ogaadaan awoodooda ilaa xad buuxda. Waxaan rajaynayaa in aan ku siin kara jawi waxbarasho taageero ah oo ay ardayda aan loola cararay galay go'aan gaarista ku saabsan mustaqbalkooda, iyo halkii ay raaci karaan habka wanaagsan ee maxkamad iyo qalad in iyaga awood u siin doona in ay kalsooni badan in mustaqbalka in ay ugu danbeyn dooran.
Si aad u beeri ardayda awoodaha inventive badan, dhammaan xubnaha shaqaalaha macalimiinta iyo maamulka waa in ka go'an in ay ku raad dadaallada cilmi-baarista iyo qaaraan bulshada in jiitaan dareenka caalamiga ah. University Kyoto leeyahay 10 Caqlina, 18 dugsiyada graduate, 14 machadyada cilmi (in ka badan jaamacadaha kale ee Japan), iyo xarumo badan oo waxbarasho iyo cilmi kale. Waxaan la samayn doonaa si loo xaqiijiyo in darafkii ugu gool waa da'weynaatay guud, kuwaas oo dhammaan laamaha kala duwan ee bulshada ee jaamacadda.
Kulliyadda Pharmaceutical Sciences
Graduate School of Waraaqaha
Graduate School of Sciences Pharmaceutical
The forerunner of the Kyoto University was the Chemistry School founded in Osaka in 1869, taas oo, despite its name, taught physics as well. Later, ah Third Higher School was established in the place ofSeimi-kyoku in 1886, it then transferred to the university’s present main campus in the same year.
Ka dib dagaalkii labaad ee dunida, the current Kyoto University was established by merging the imperial university and the Third Higher School, which assumed the duty of teaching liberal arts as the Faculty of Liberal Arts. The faculty was dissolved with the foundation of the Faculty of Integrated Human Studies in 1992.
Ma rabtaa discuss Kyoto University ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
jaamacadaha kale ee Japan
Okayama University Kitą-ku